Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba ezihlaziyiweyo » Ukudibanisa iiHighes ze-DC kunye neeVillians ngeMidlalo yeSelfowuni
Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! • Iindaba ezihlaziyiweyo
Umdlalo wokuqala we-RPG wephazili ohambahambayo onabalinganiswa abaziwayo be-DC ifika ngo-2022 kwaye ngoku ivulekele i-pre-gesitrations.
Umphuhlisi ophambili wokuzonwabisa ohambahambayo uLudia, isitudiyo seSixeko saseJam, namhlanje utyhile i-DC Heroes & Villains, umdlalo wokuqala wokudlala indima yepuzzle (RPG) ebekwe kwi-DC Universe, enikwe ilayisenisi yiWarner Bros. Interactive Entertainment egameni le-DC. Umdlalo uya konwabisa abalandeli bee-comics ze-DC ngebali lokuqala elibonisa iinkwenkwezi ezithandekayo ze-Super Heroes kunye ne-Super-Villains kubandakanya uBatman, uSuperman, uWonder Woman, iJoker kunye noHarley Quinn. I-DC Heroes & Villains iya kufumaneka kwihlabathi jikelele ekuqaleni kuka-3 kwi-App Store kunye ne-Google Play. Ukuqala namhlanje, amaqhawe kunye nabangendawo ngokufanayo banokubhalisa kwangaphambili ukufikelela kumdlalo kwaye bafumane izinto zebhonasi ezikhethekileyo ekuqalisweni, ku-www.dcheroesandvillains.com.
Iqulathe ibali elityebileyo, eliyintsusa, iDC Heroes & Villains izisa iindawo ezinomfanekiso onje ngeendledlana zeGotham City kunye nobunzulu beAtlantis ebomini. I-pulse engaqondakaliyo ihluthe onke amandla amakhulu kwaye kuya kuba kubadlali ukuba bafune iqela lamandla lokugqibela, kumacala omabini obulungisa, ukunqanda ukuphela ngokupheleleyo.
Abadlali kuya kufuneka babe nobuchule njengoko behamba ngendlela eyomeleleyo ye-DC Heroes & Villains, ezaliswe ngumceli mngeni womdlali omnye-madabi emi-3 kunye neziganeko zeqela apho kuya kufuneka ukuba bahlanganise abahlobo babo ukuze boyise abaphathi ukuze bafumane umvuzo omkhulu. Iminyhadala ecwangcisiweyo ebukhoma kubandakanya imidlalo yePVP kunye neGuild Raids iya kuhlanganisa abalandeli beDC abavela kwihlabathi liphela ukuze bazibandakanye kumlo wokufumana umvuzo okhethekileyo kumdlalo.
“Sinebhongo kakhulu ngokubhengeza isihloko sethu esitsha, iDC Heroes & Villains,” utshilo u-Alex Thabet, iCEO yeLudia. “Lo mdlalo ubonisa okona kulungileyo kweLudia, ngokudlala umdlalo obandakanyekayo kunye neetekhnoloji ezintsha eziluphawu lwemidlalo yethu ephumelele amabhaso. Sikholelwa ukuba oku kuya kunika abalandeli beDC imbono entsha ngokupheleleyo yabalinganiswa, iindawo ezisingqongileyo kunye nezinto abazithandayo. "
“Asinakuchukunyiswa ngakumbi ngamaQhawe e-DC kunye neeNgcaciso, ezibeka italente kaLudia kunye nobuchule bakhe kumboniso opheleleyo,” utshilo uChris DeWolfe, umseki kunye ne-CEO yeJam City. “Esi iya kuba sisihlandlo sokuqala abalandeli beDC benokwenza awabo amaqela amaphupha kumdlalo wokudlala indima emi-3, odibanisa amaqhawe kunye nabangendawo. Ndiqinisekile ukuba abalandeli bazakubethwa ngumoya ngento abanokuyenza emdlalweni.”
I-Jam City isandula ukugqibezela ukufumana i-Ludia ngoSeptemba ka-2021, iqhubeka nokuzalisekisa uthumo lwenkampani yokuxhasa ipotfoliyo yayo yehlabathi yezitudiyo eziphezulu eziphuhlisa kwaye zipapashe imidlalo ephuhliswe kakhulu yangaphakathi kunye neqela lesithathu elinelayisenisi yemidlalo esekwe kwi-IP.